Bogga ugu weyn Nvidia Shield vs Roku Ultra: Sanduuqa Qulqulka ugu Fiican Sanadka 2022
Inta badan TV-yada casriga ah waxay leeyihiin ciyaartoy durdurro caqli badan leh oo horay loo dhisay. Laakiin dad badan ayaa wali doorbida inay adeegsadaan sanduuqyada qulqulka oo kali ah waxaana jira kuwo badan oo ku xeeran sida Nvidia Shield TV iyo Roku Ultra.
Marka, aniga oo u eegaya qoraalkan, waxaan go'aansannay inaan u keeno doodda laba ka mid ah kuwa ugu caansan - Nividia Shield vs Roku Ultra.
Labadan sanduuq ee qulqulka ah waxay noqdeen kuwa loo tago qof kasta oo raadinaya aalad qulqulka wanaagsan ee 4K HDR.
Nividia gaashaanka Tv wuxuu bixiyaa madadaalo wanaagsan oo 4K ah oo ay weheliso Dolby Vision Atmos, kor u qaadista AI, qaddarka Tegra X1+ chip, iyo xawaaraha ethernet -ka degdegga ah.
In kasta oo Roku Ultra, dhanka kale, ay siiso marin u helid maado bilaash ah, maktabad si sahlan loo raadin karo, iyo ku-biirinta dhowaan ee Dolby Atmos iyo Vision.
In kasta oo labaduba yihiin ciyaartoy karti leh oo warbaahineed, marka si hoose loogu fiirsado miiska hoostiisa waxay muujineysaa xoogaa kala duwanaansho cad, isku ekaansho, iyo astaamo aad u wanaagsan oo u geeya iibsadayaasha kala duwan.
Markaa dhibaatadu hadda waxay noqotaa: midkee ku habboon baahidaada? Ma Roku Ultra mise Nividia Shield TV? TV -ga Nividia Shield ma u qalmaa marka loo eego Roku Ultra?
Dhammaan su'aalahan iyo kuwa ka sii badan ayaa looga jawaabi doonaa maqaalkan Nividia Shield vs Roku Ultra maqaalkan.
Waa maxay Nvidia Shield?
TV -ga Nvidia Shield waa cayaaryahan dijital ah oo Android ah oo ay soo saartay NVIDIA oo qayb ka ah astaanta gaashaanka ee aaladaha Android.
Waxaa loogu talagalay inuu u adeego qof walba iyadoon loo eegeyn takhasuska. Haddii aad tahay xamaasad warbaahineed, xamaasad ciyaar, ama socod si caadi ah, SHIELD TV ayaa ku daboolay.
Sidoo kale waa mid horumarsan TV Android qulqulka cayaaraha warbaahinta ee leh Kaaliyaha Google ee gudaha ku jira iyo 4K HDR.
Habkaani wuxuu kaa caawinayaa raadinta filimada iyo bandhigyada, marin u helidda xakamaynta dib -u -ciyaaridda warbaahinta, beddelidda heerkulka, iftiiminta nalalka, iyo waxyaabo kaloo badan. Waxay sidoo kale kaa caawineysaa inaad daawato bandhigga aad ugu jeceshahay tayada ugu sarreysa.
Xaqiiqdii, Nvidia Shield TV waxaa loogu talagalay dadka isticmaala kuwa aadka u dalbanaya oo si qurux badan loogu talagalay inay noqoto udub dhexaadka xaruntooda madadaalada. Nooc ka sarreeya waxaa loo yaqaan Nvidia Shield Pro.
Waa maxay Roku Ultra?
Roku Ultra waa ciyaartoy warbaahin dhijitaal ah oo ay soo saartay shirkad Mareykan ah Roku, Inc. Qalabku wuxuu ku siinayaa marin u helidda wararka warbaahinta kanaallada aad jeceshahay ee tooska ah ee 4K, HDR, iyo tayada sawirka Dolby Vision.
Intaa waxaa sii dheer, waa sanduuq durdur bilaa wireless ah oo markaa kuu oggolaanaya inaad ku qulqulatid qolalka ka fog router -gaaga.
Waxa kale oo aad ku xidhi kartaa taleefankaaga ama kiniinigaaga Bluetooth si aad ugu ciyaarto muusigga aad jeceshahay, baloogyada, iyo in ka badan iyada oo ku hadasha TV -gaaga.
In kasta oo Roku Ultra uu u yahay qof walba, waxay si weyn diiradda u saareysaa adeegsadayaasha Apple.
Nvidia Shield vs Roku Ultra: Yaa Guuleysanaaya?
Sanadka 2019, NVIDIA waxay ku guuleysatay tartankii Nvidia Shield vs Roku Ultra, iyada oo ay ugu mahadcelinayaan sifooyinkeeda sare iyo astaamaha. Oo dagaalku wuxuu noqday mid aad u sii xoog badan maadaama Roku Ultra cusub uu ku daray kor u qaadis astaamihiisii ​​hore.
Qaar ka mid ah astaamaheeda cusub waxaa ka mid ah Dolby Vision iyo Atmos, taageerada Bluetooth, iyo baaxadda wireless -ka oo la hagaajiyay.
Si kastaba ha noqotee, Nvidia Shield ayaa isku mid ah iyada oo aan la helin casriyeyn muuqata ama astaamo cusub. Tani ma qiil ka dhigaysaa qiimaheeda sare? Goor dhow ayaan ogaan doonaa
Waxa aan hubno waa tan, waxaa jira tartan - Nvidia gaashaan vs Roku Ultra oo waxaan miiska soo saareynaa dhammaan qodobbada.
Eeg kuwan TV -yada Cable dambe ma jiraan: 15 barnaamijyo TV oo bilaash ah
Nvidia Shield vs Roku Ultra: Noocyada
Markay timaaddo awoodda wax -ka -qabashada, qaababka fiidiyowga/maqalka, iyo xulashooyinka isku -xirnaanta, Roku Ultra iyo Nvidia Shield waa isku mid. Faahfaahinta kale ee kala duwan ayaa hoos ku taxan.
processor RealTek RTD1319 (afar-gees) NVIDIA Tegra X1+ (afar gees)
Caawiyaha codka Kaaliyaha Google, oo la shaqeeya Alexa Kaaliyaha Google, oo la shaqeeya Alexa
Nidaamka Operating TV Android Roku OS
Kaydinta dibedda iyada oo loo marayo booska kaarka MicroSD adoo adeegsanaya dekedda USB
Kaydinta gudaha 8GB 2GB
Xalka taleefanka 4K, HDR, HDR10, Dolby Vision at 60 FPS 4K, HDR, HDR10, Dolby Vision at 60 FPS
Shabakadda Wireless 802.11ac 2 × 2 MIMO 2.4 GHz / 5 GHz 802.11ac MIMO 2.4 GHz / 5 GHz
HDMI HDMI 2.0b oo leh HDCP 2.2 iyo taageerada CEC (xadhig kuma jiraan) HDCP 2.2 HDMI (xadhig lagu daray)
AirPlay 2 & HomeKit Maya Haa, (cusboonaysiinta soo socota)
Astaamaha ciyaarta Waxay la shaqaysaa NVIDIA GeForce Now ama barnaamijyada TV -ga Android None
size 6.5 ″ x 1.57 ″ x 1.57 ″, 4.83oz 14 ″ x 4.2 ″ x 2.4 ″, 38.4oz
Xakamaynta fog Haa Haa
Ethernet dekedda Gigabit 10/100 Mbps deked
Roku Ultra vs Nvidia Shield : Naqshad
Markii ugu horreysay ee aan la kulmo labadan badeecadood, waxa ugu horreeya ee aan ogaaday waa naqshadda. Roku Ultra wuxuu ku yimaadaa qaab afar jibbaaran oo leh caag madow oo dhisme ah iyo dekado gadaashiisa ah. Waana intaas uun, ma jirto fiirin dheeraad ah. Uma yeeliso foolxumo, laakiin sidoo kale indho qabad ma leh.
Nvidia Shield dhanka kale wuxuu leeyahay naqshad aad u xiiso badan. Qalabku wuxuu ka yimaadaa qaab cylindrical ah oo leh caag madow oo dhisme ah iyo dekado gadaashiisa ah.
Waxaa intaa dheer waxay kaloo leedahay waxoogaa xardho dheeraad ah oo ay dekaduhu ka dhisan yihiin. Naqshadani waxay siinaysaa muuqaal ka baxsan uun ahaanshaha sanduuqa qulqulka, waxay leedahay muuqaal soo jiidasho leh.
Naqshad kale oo la tixgelinayo waa meel fog. Fogaanta Roku Ultras waxay leedahay kontaroolada dib -u -ciyaarida, suunka jihada, badhamada qaar ee barnaamijyada kale ee qulqulka sida Netflix, dekedda dhagaha ee dhegaysiga khaaska ah, iyo makarafoonka gacanta codka.
Intaa waxaa sii dheer, waxaad ku riixi kartaa badhanka Roku laftiisa kaas oo sameeya dhawaaqa fog fog, si uu kaaga caawiyo inaad hesho.
Dhanka kale, fogaanta TV -ga Nvidia Shield waa mid cajiib ah. Waxay leedahay qaab saddex-geesood ah, badhamada madow ee dhaqdhaqaaq-dhaqaajinaya jihooyinka, makarafoonka xakamaynta codka, iyo badhanka toobiye ee Netflix.
Waxa kale oo ay leedahay muuqaal-fog-fog oo laga heli karo oo keliya barnaamijka NVIDIA, oo aan ku habboonayn.
NVIDIA waxay dhowaan samaysay casriyeyn kuu oggolaanaysa inaad ku darto tallaabooyin badan oo loo habeeyay badhamada fog, sida falalka gaarka ah ee dhacaya markaad laba jeer taabato badhanka menu-ka. Laakiin waa inaad xusuusataa badhamada sameeya ficillada gaarka ah.
Upscaling AI iyo Ciyaarta: Nvidia Shield vs Roku Ultra
Nvidia gaashaan iyo Roku Ultra labaduba waxay bixiyaan qulqul tayo sare leh, laakiin Nvidia Shield waxay ku guuleysataa tartanka loogu talagalay soo gudbinta waxyaabaha xallinta hooseeya si ay ugu muuqato xallin sare.
Sida aaladaha qulqulka badankood, Roku Ultra wuxuu qaataa xalka hoose ama HD-ka wuxuuna si otomaatig ah u fidiyaa pixels si uu ugu habboonaado TV-gaaga 4K halka NVIDIA ay u isticmaasho AI si ay ugu daboosho pixels-ka madhan, kor u qaadista waxyaabaha ka socda 360p illaa 1440p oo ka dhigaysa inay u eg tahay inay asal ahaan dhammaantood yihiin 4K.
Waxaad u hagaajin kartaa AI si aad u hooseyso, dhexdhexaad ah, ama kor u qaadis sare, maxaa yeelay saameyntu waxay u eegi doontaa wax la yaab leh qaar ka mid ah laakiin kuwa kale ayaa macmal ah.
Waayo, ciyaaraha, NVIDIA Shield TV wuxuu ku siinayaa marin u helka GeForce Now, adeegga qulqulka ciyaarta oo kuu oggolaanaya inaad marin u hesho ciyaaraha AAA bilaa wireless.
GeForce waxaa soo saaray NVIDIA oo hadda si fiican ayuu u shaqeeyaa oo kaliya waxaad u baahan doontaa inaad hesho xakameeyaha Bluetooth. Nvidia Shield sidoo kale waxay kuu oggolaaneysaa inaad ciyaarto ciyaaraha TV -ga Android.
Roku dhinaca kale ma laha ikhtiyaar isagana.
Baro sida loo Ku Samee Lacag Hal Saacad | 2022
Nvidia Shield vs Roku Ultra: Nidaamyada hawlgalka
Faahfaahinta kale ee sanduuqaaga qulqulka run ahaantii muhiim ma aha haddii kale waxay leedahay nidaam qalliin oo kugu habboon. Nidaamka hawlgalka (OS) wuxuu kuu oggolaanayaa inaad raadiso waxyaabaha ku jira, barnaamijyada la jaan qaadaya, iyo amarrada codka si loo xakameeyo waxa ku jira.
Hadda, annaga oo keenaya labadeenna tartame Roku Ultra vs Nvidia Shield, aan falanqeynno sida ay u shaqeeyaan.
Nvidia Shield TV wuxuu ku shaqeeyaa isagoo adeegsanaya TV -ga Android kaasoo marin u leh barnaamijyo badan oo lacag la'aan ah, oo ay ku jiraan inta badan barnaamijyada qulqulka ee ka caawiya Apple TV.
Gaashaanka Nvidia ayaa ugu fiican sanduuqa TV -ga Android, tanina waxay ka dhigaysaa iibsi lagu kalsoonaan karo oo loogu talagalay isticmaaleyaasha app -ka caadiga ah ee Android.
Intaa waxaa sii dheer, NVIDIA Shield TV waxay leedahay amar Kaaliyaha Google oo gudaha ku jira kaas oo la jaan qaada Chromecast-ka cusub ee la sii daayay oo leh TV-ga Google oo laga dhisay TV-ga Android si loo abuuro TV-ga Google, oo ah madal qulqulka leh talooyinka nuxurka ku saleysan ee AI iyo amarrada Kaaliyaha Google ee wanaagsan.
Sidaa darteed, waa aamin in la yiraahdo Nvidia Shield Tv ayaa u jirta isticmaaleyaasha Android.
Dhanka kale, Roku wuxuu leeyahay istcimaal si sahlan loo adeegsan karo oo leh dhammaan barnaamijyada waaweyn ee bilaashka ah (oo ay ku jiraan Apple TV) iyo kanaallo badan oo toos ah oo lacag la’aan ah. Waxay la jaan qaadi kartaa Alexa -gaaga ama kuwa ku hadla Kaaliyaha Google.
Shirkadda ayaa sheegtay in dhowaan ay awood u yeelan doonto inay ku shubto waxyaabaha ku jira barnaamijka Apple AirPlay 2, iyo sidoo kale in lagu maamuli karo Apple HomeKit.
Markaa, waxaad dhihi kartaa Roku Ultra ayaa aad u daryeela dadka isticmaala Apple.
Samee: Nvidia Shield TV vs Roku Ultra
Sameynta labada sanduuq ee qulqulka- Nvidia Shield iyo Roku Ultra waa inaysan noqon mid aad u adag. Markaad sanduuqyada dhigto, waa inaad awood u yeelatid inaad isticmaasho adigoon haysan kaalmo xirfadeed.
Si aad u dejiso, waxaad ku bilaabi doontaa adoo ku xiraya fiilada HDMI sanduuqa qulqulka ka dibna TV -ga ka hor intaadan ku xirin il koronto.
Marka TV-gaaga iyo aaladdaadu daaran yihiin oo loo dejiyo gelinta saxda ah, waxaad raaci kartaa tilmaamaha shaashadda si aad u dhammaystirto dejinta.
Nvidia Shield TV, waa inaad gasho koontadaada Google si aad u dhammaystirto dejinta, halka Roku Ultra, waa inaad abuurtaa ama gasho koontadaada Roku.
Habka dejinta gabi ahaanba waa sahlan tahay waxaadna yeelan doontaa tilmaamo aad ku raacdo labada dhinacba.
Nvidia Shield vs Roku Ultra: Faa'iidooyinka iyo Qasaarooyinka
In kasta oo aan muujineyno astaamaha mid kasta oo ka mid ah sanduuqyadan qulqulka ah, Waa sax kaliya inaan ka wada hadalno, dhinacyada wanaagsan iyo kuwa xunba- Nvidia Shield TV iyo Roku Ultra. Waa kuwan faa'iidooyinka isticmaalka mid ka mid ah sanduuqyada qulqulka.
Faa'iidooyinka: Nvidia Shield iyo Roku Ultra
Naqshadeynta tuubada is haysta Afyare USB oo lagu kaydiyo, ciyaar maxalli ah
AI waxay kor u qaadeysaa waxyaabaha aan ahayn 4K Mustaqbalka AirPlay 2, taageerada HomeKit
Badhanka Kaaliyaha Google ee fog Gawaarida gaagaaban, jaakada dhagaha ee fog
Taageerada GeForce Now, ciyaaraha TV -ga Android Ka jaban NVIDIA Shield TV
Qasaarooyinka: Nvidia Shield vs Roku Ultra
Waa kuwan hoos u dhaca adeegsiga mid ka mid ah ciyaartoydan qulqulka leh.
Qiimaha Ma jiro kaaliye la dhisay
Kuma rarto fiilada HDMI Ikhtiyaarada ciyaarta ugu yar
Baro Sida Loo Helo TV -ga Cable oo Lacag Leh oo leh Internetka Cable
Nvidia vs Roku Ultra: Kee baan rabaa inaan iibsado?
Labadaba Roku Ultra iyo Nvidia Shield labaduba waa sanduuqyo qulqul wanaagsan oo leh dib u eegisyo wanaagsan sanadihii la soo dhaafay laakiin Nvidia Shield TV waa muran la'aan qalab aad u awood badan waxaana awooddan lagu arkay qiimaheeda qaaliga ah ee $ 150.
In kasta oo Roku Ultra uu isbarbardhig ahaan ka jaban yahay Nvidia Shield Tv, $ 100, sidoo kale waa sanduuq qulqulaya caan ah oo leh OS fudud iyo waxyaabo badan oo bilaash ah.
Sidoo kale, Roku Ultra iyo Nvidia Shield labaduba si fudud bay u maarayn karaan waxyaabaha xallinta sare leh, laakiin NVIDIA oo keliya ayaa kuu oggolaanaysa inaad daawato waxyaabo ka weyn, oo aan 4K ahayn oo ku jira TV-yada cusub welina ka dhigay inay u ekaadaan dabiici.
Haddii waxa kaliya ee aad u baahan tahay ay tahay sanduuqa qulqulka 4K HDR oo leh cod fog iyo codsiyo badan oo lacag la'aan ah, markaa Roku Ultra ayaa noqon lahaa ta ugu habboon. Jaakadda taleefanka dhagaha iyo kaarka microSD waxay bixisaa waxoogaa raaxo ah.
Laakiin haddii aad rabto khibrad qulqulid heer sare ah oo leh astaamo ay ka mid yihiin Dolby Vision HDR, maqalka Immersive oo leh Dolby Atmos hareeraha dhawaaqa markaa Nvidia Shield TV waa ikhtiyaar ka fiican.
Tani waa sababta oo ah dhamaadka dhammaantood haddii Nvidia Shield Tv ay u qalanto dhammaan lacagtaas marka la barbar dhigo Roku Ultra runtii waxay kuxirantahay baahiyahaaga qulqulka.
Waxay leedahay muuqaalo layaab leh oo ay kuu keeneen Dolby Vision HDR, iyo maqal wax -ku -ool ah oo leh Dolby Atmos oo ku wareegsan dhawaaqa. Hadda awoodda leh waxay leedahay dalabyo Kaaliyaha Google ee gudaha ku jira.
KA Iibso WAXYAABAHA UGU FIICAN
Waxay kor u qaadeysaa TV kasta oo leh awood xoog leh iyo dhawaaq shaneemo leh Dolby AudioEasy-to-use Roku player streaming streaming in. Hadda waxay leedahay Voice remote leh kontaroolada TV -ga.
Siyaabaha Ugu Wanaagsan Ee Loo Iibsado Dahabka 2022 | Hoggaamiyaha Khubarada
NVIDIA Shield iyo Roku Ultra: Keebaad iibsanaysaa?
Dib -u -eegista PC Matic 2021: Ma yahay Antivirus -ka ugu Fiican | Siduu U Shaqeeyo
Markaad isticmaalayso qalab kasta oo elektaroonik ah, waxa laga yaabaa inaad ka baqdo hanjabaado (fayras) kuwaas oo dhibaato u keeni kara…
Dib -u -eegista Lacagta Lacag -bixinta Lacag -bixinta ee 2022: Ma sharci baa mise waa khiyaano soo -saare Lacag -Sameeye Online ah
Dib u eegista lacagaha Paypal money waxay badbaadin doontaa tiro badan oo dadka doonaya inay lacag degdeg ah ka sameeyaan in la khiyaaneeyo.
BookScouter wuxuu kaa caawinayaa inaad iibiso buugaagta akhriska iyo buugaagta aad isticmaashay lacagta ugu badan adigoo isbarbar dhigaya dalabyada ka badan 30…
Daawashada iyo gujinta xayeysiisyada ayaa weli ah hab kale oo lacag dhaqso ah looga sameeyo dhinaca haddii aad…